Cabdi iley oo caydhiyay wasiirkii madaxtoyada xilal cusubna magacaabay. | ogaden24
Cabdi iley oo caydhiyay wasiirkii madaxtoyada xilal cusubna magacaabay.
Madaxa maamulka Kililka oo tan iyo dhamaadkii shir kusheegii xisbiga ku Guda jiray xil kaqaadis iyo magacaabis ayaa cadhiyay wasiirkii ugu itaalka roonaa xaabada loogu yeedho wasiirada.
Deeq Cabdullahi Buraale oo ku magac dheeraa Deeq Laba Go’le 2-dii sano ee u dambaysayna ahaa wasiirka Idman ee madaxtooyada, ayuu Horjooge Cabdi iley kadaba Geeyay shakhsiyaad uu Horay uga qaaday xilalkii ay ugu magacawnaayeen.
Waxaa jira xog soo baxaysa oo sheegaysaa in Deeq Laba Go’le Hoos loo dalacsiiyay lagana dhigay wasiir kuxigeenka madaxtoyada, balse warkani ayaa ah mid aan si rasmi ah loo Hubin.
Dhinaca Kale Horjooge Cabdi iley ayaa waxaa uu magacaabay Horin xilal ah oo uu u magacaabay shakhsiyaad intooda badan saaxada siyaasada ku cusub, kuwaasi oo buuxinaya boos in mud ah iska banaanaa iyo kuwo shakhsiyaadkii hayay dhowaan laga qaaday, waxaana kamid ah xubnha la magacaabay.
1- Cabdimahad Cabaas oo loo magacabay booskii laga Qaaday Deeq Cabdullahi Laba Go’le ee wasiirka madaxtoyada.
2- Cabdirixman Xasan oo loo magacaabay wasiirka dakhliga Kililka oo banaanaa.
3- Faadumo Takhal oo loo magacaabay wasiirka Xoola iyo reer Guuraaga.
4- Asad Cumar oo isna loo magacaabay wasiirka Jidadka iyo wadooyinka Kililka.
Horjoogaha maamulka Jigjiga oo shaki badan kaqaba shakhsiyaadka lashaqeeya ayaa 3-dii bilood ee ugu dambaysay waxaa uu caydhiyay inta badan shakhsiyaadkii ku magacawnaa xilalka kala duwan ee Kililka, walina waxaa banaan boosas shakhsiyaadkii hayay Horay uu u caydhiyay cid cusubna uusan u magacaabin.